Voina teny an-dalana :: Mpandeha bisikileta main'ny herinaratra tamin'ny andrin-jiro • AoRaha
Loza tampoka. Maty tsy tra-drano ny lehilahy iray main’ny herinaratra, tany Feramanga Ambatondrazaka, afak’omaly tokony ho tamin’ny dimy ora sy sasany hariva. Nianjera ny andrin-jiro iray. Tapaka ny tariby mpitondra herinaratra ka nifatratra teny amin’io lehilahy io. Voalaza fa kila tanteraka tamin’izany ny vatany. Tsy nisy azo natao intsony nanavotana ny ainy.
Nisy oram-be narahina rivotra nifofofofo, tany Ambatondrazaka sy ny faritra manodidina, afak’omaly tolakandro, nitohy ny harivariva. Teny an-dalana hamonjy fodiana any Ambararata ny lehilahy iray, manodidina ny dimampolo taona, nandeha bisikileta. Niharam-boina izy rehefa nandalo tany Feramanga, kilaometatra vitsy miala ny tampon-tanànan’ Ambatondrazaka.
«Noho ny hamafin’ny fitsokan’ny rivotra no nampianjera ny andrin-jiro iray teo amin’ny arabe. Niala ny tariby iray amin’irony mpitondra herinaratra mahery vaika irony. Nitselatselatra izany ka nahakapoka an’ilay lehilahy teny ambony bisikileta», hoy ny mpitandro filaminana nanao ny angom-baovao tamin’ireo olona nahita maso ny fitrangan’ny loza.
Ambony sy mafy ny herin’ny herinaratra niantefa teny amin’ ilay lehilahy. Nikarainkona sy kila tanteraka ny vatany. Nieren-doza, tsy nisy naratra na namoy ny ainy kosa ireo olona hafa niara-dalana taminy. Natolotra ny fianakaviana ny razana, taorian’ny fizahana nataon’ny mpitsabo sy ny mpitandro filaminana.
«Nalaza teto an-tanàna sady nampivarahontsana anay iny vaovao mampalahelo iny. Vao sambany rahateo ny loza tahaka iny. Mitebiteby izahay », hoy ity vehivavy iray mipetraka any Ambatondrazaka tsy lavitra ny toerana nisehoan’ny loza.
Loza tany Mampikony :: Maty nazeran’ny môtô ity ben’ny tanàna teo aloha